China Smt Assembly Service Abavelisi kunye neFektri, abaXhasi amaxabiso aphantsi | PhiliFast
Inkonzo yeNdibano yeSmt
Inkonzo yeNdibano yeSmt-abavelisi, abaFektri, abaThengisi base China
Sihlala siwenza umoya wethu '' woTshintsho oluzisa inkqubela phambili, ukwenza umgangatho ophezulu wokutya, inzuzo yokuthengisa, Amanqaku okutsala abathengi kwiNkonzo yeNdibano yeSmt, Uyilo lwePcb, I-Pcb Fabrication kufutshane nam, Iinkonzo zeNdibano zeBhodi yeeSekethe eziprintiweyo,Izixhobo zeBhodi yePcb. Wamkelekile abathengi behlabathi lonke ukuba banxibelelane nathi ngokushishina kunye nentsebenziswano yexesha elide. Siya kuba liqabane lakho elithembekileyo kunye nomthengisi wamalungu ezinto ezizenzekelayo kunye nezinto ezise China. Imveliso iya kubonelela kwihlabathi liphela, njengeYurophu, iMelika, iOstreliya, iSuriname, iComoros, iIndiya, iCroatia.Sibonelela ngenkonzo yobungcali, impendulo ekhawulezileyo, ukuhanjiswa kwangexesha, umgangatho ophezulu kunye nexabiso elifanelekileyo kubathengi bethu. Ukwaneliseka kunye nekhredithi elungileyo kuye wonke umthengi yeyona nto iphambili kuthi. Sijolise kuzo zonke iinkcukacha zokwenza iodolo kubathengi de bafumane iimveliso ezikhuselekileyo nezisandi ngenkonzo elungileyo yokuhamba kunye neendleko zoqoqosho. Kuxhomekeke koku, iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kumazwe ase-Afrika, eMid-East nakwi-Southeast Asia.
Flexible pcb 6 Ulwaleko fpc Flexible-ziqinile PCB ukwenziwa Flex PCB Cable (FPC) ziqinile-Flexible ibandla pcba
Uhlaziyo lwamva nje ngo-2021: intengiso yetekhnoloji yomphezulu wentaba (SMT) ...
Fumana isampulu yengxelo yasimahla ekhethekileyo kubuchwephesha bokunyuka komhlaba ... I-Hitachi High-Tech Corporation (eJapan), iNdibano ye-ASM ... Ukubekwa, ukuhlolwa, ukuthengiswa, ukuprinta kwescreen, ukucoca, ukulungisa nokusebenza kwakhona, njl.
Uvavanyo lweqhinga lama-2021 lweMarike yeTape yeArasrive ...
IPolyolefin (PO). Polyvinyl chloride (PVC). IPolyethylene terephthalate (PET). enye. Ulwahlulo lwentengiso ngesicelo: indibano ye-SMT.
Itekhnoloji yomphezulu wentaba (SMT) yemakethi yezixhobo ...
Izixhobo zetekhnoloji yaphezulu (SMT) oomatshini, izinto ... inkampani; Inkampani yeJUKI; IViscom AG; Iinkqubo zeNdibano yeASM yeGmbH kunye neCo ... ulwandiso oluninzi kwiimveliso zalo ezikhoyo kunye nokunikezelwa kwenkonzo.
I-BTU yamanye amazwe kunye ne-Hentec / RPS iphumelele i-SMT yodumo ...
I-SMT China Magazine yaphehlelela ii-SMT China Vision Awards ngo-2007 ukuya ... e-China, ibonelela ngentengiso ngqo kunye neenkonzo e-United States, Asia nase-Yurophu. ... Nokuveliswa kwecandelo elektroniki, ukuhlangana kunye nokuhanjiswa.
I-Critter kunye ne-Guitari fakela umgca wangaphakathi we-PCB ukusuka ...
"Inkxaso kunye nenkonzo zilunge kakhulu," utshilo u-Osborne. "Esi sisixhobo sethu sokuqala se-SMT salo naluphi na uhlobo, ke ukufumana olu hlobo lwenkxaso kubalulekile."
Ibandla eliphambili lifumana isatifikethi se-AS9100D
I-Aurora, Colorado / PRNewswire / -INdibano ePhambili, uvulindlela kwindibano ye-PCB yendibano ekhawulezileyo, namhlanje ubhengeze ...
Inkonzo yeNdibano yeSmt IiVidiyo ezihambelanayo ezivela kuYouTube
Ngethamsanqa ngenene ukufumana umenzi onobuchule kunye noxanduva, umgangatho wemveliso ulungile kwaye ukuhanjiswa kwangexesha, kumnandi kakhulu.
Akukho lula ukufumana umboneleli onobuchule kunye noxanduva ngeli xesha lanamhlanje. Ndiyathemba ukuba sinokugcina intsebenziswano yexesha elide.
UJohn biddlestone NgoJanuwari 2020
Imveliso esemgangathweni ilungile, inkqubo yoqinisekiso lomgangatho igqityiwe, lonke ikhonkco linokubuza kwaye lisombulule ingxaki ngexesha elifanelekileyo!
USalome NgoJanuwari 2020
Umlawuli weNkampani unamava olawulo osisityebi kakhulu kunye nesimo sengqondo esingqongqo, abasebenzi bokuthengisa bashushu kwaye bonwabile, abasebenzi bezobuchwephesha banobuchule kwaye banoxanduva, ngenxa yoko asinaxhala ngemveliso, umenzi olungileyo.
Nydia NgoJanuwari 2020
Emva kokusayina ikhontrakthi, safumana izinto ezonelisayo ngexesha elifutshane, le yinto encomekayo.
Ipoppy 2020.02.11 02:54:11
Siyinkampani encinci esele iqale, kodwa sifumana ingqalelo yenkokeli yenkampani kwaye yasinika uncedo oluninzi. Ndiyathemba ukuba singenza inkqubela kunye!
IBhodi yePcb ekwi-Intanethi
Umbane weBhodi yePcb yoMvelisi
Indibano yePcb ekwi-Intanethi
Imveliso ePcb encinci
Umenzi weBhodi yePcb
Jika ngokukhawuleza iPcb